Izindwangu zeRoller Blind Zibe yimfashini eyinhloko yokuvikela elangeni embonini yamanje. Njengoba inenzuzo yokusebenza okulula, ubuciko, isikhathi eside sokuphila futhi kufaneleka kangcono izindawo ezihlukile. Ngenxa yesidingo esengeziwe sokulondolozwa kwamandla ne-priva ...Funda kabanzi »
I-R + T World'S Leading Trade Fair Yama-Roller Shutters, Iminyango / Amasango Nezinhlelo Zokuvikela Ilanga
I-ETEX izohambela i-R + T 2021 Stuttgart ene-booth eklanyelwe ukukhombisa amaklayenti ethu umklamo wakamuva wokuqamba izindwangu ezingaboni. Kunemiklamo engaphezu kwe-200 yeblackout eklanyelwe entsha, i-translucent, i-jacquard, i-sunscreen, izinto zokusebenza ezisebenzayo. ...Funda kabanzi »
Ukugxila kwe-ETEX kukhwalithi ephezulu yokwenza izindwangu nokwakheka. Kusukela sisungula, sakha isiko lenkampani lekhwalithi kuqala kuzo zonke izingqondo zemisebenzi futhi siyigcine njengendawo yethu yokuphila. Ukufanisa inkambiso yesidingo ephezulu yezidingo zamazwe ...Funda kabanzi »